House for Sale in Thingangyun - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
စီးပွါးရေးလုပ်ရန်၊ လမ်းမတန်းနေရာကောင်းများ ရောင်းရန်ရှိသည်။
၁။ သဃ်န်းကျွန်း၊ ပြည်သာယာလမ်းမ 20´×60´&gt;...
Ad Number S-8820749
သဃန်းကျွန်း သုဝဏ္ဏ VIP 1 2ထပ်တိုက်စျေးတန်အရောင်း
**သုဝဏ္ဏVIP1တွင် 1sqft 1.1သိန်းသာရှိသောမြေ...
Ad Number S-8799855
သုဝဏ္ဏ VIP 3နှစ်ထပ်အာစီလုံးချင်းရောင်းမည်
Ad Number S-8797848
ေရႊလင္းအိမ္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း Close
Ad Number S-8826867
သုဝဏ္ဏ VIP အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်
6,800 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8821220
သုဝဏၰ VIP(1) ေနရာေကာင္း လုံးခ်င္းအိမ္ အျမန္ေရာင္းမည္ 📲09777723423
Ad Number S-8820988
6,600 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8818678
Ad Number S-8818479
Ad Number S-8818267
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပင်လုံအိမ်ရာတွင် လုံးချင်း RC 2ထပ် ​ရောင်းရန်ရှိသည်။
Ad Number S-8817684
သုဝဏ္ဏ VIP 1 သစ်ရာပင်လမ်းတွင် ​( ​ထောင့်ကွက် ) လုံးချင်း RC 2ထပ် ​ရောင်းရန်ရှိသည်။
Ad Number S-8817607
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏ VIP 1 ကံ​ကော်မြိုင်လမ်းတွင် လုံးချင်း RC 2ထပ်...
Ad Number S-8817583